रूस मा दिन खेत कामदार: तिथि
गाउँमा कार्यकर्ता को कठिन काम बारे, आफ्नो छुट्टी र यसको घटना इतिहास छोटकरीमा यस लेखमा छलफल गरिनेछ। को विशाल रूसी भूमि मा ती जो नथाकीकन प्रारम्भ देखि रात काम गर्न - विभिन्न पेशों को किसानहरु को कुन दिन र यसलाई मनाइन्छ कसरी ग्रामीण कार्यकर्ता? यो सबै यहाँ पाउन सकिन्छ।
इतिहास र छुट्टी को महत्त्व
कृषि - यो मानव गतिविधिको सबैभन्दा प्राचीन रुप हो। सबै एक पल्ट यो पहिलो अनाज को अवतरण संग जमीन मा काम गर्न थाले।
अर्थव्यवस्था को मूल देखि सक्रिय गठन भएको थियो , स्टोन आयु पुरातन आदिम मानिस देशमा खेती र सबैभन्दा सरल उपकरण र रत्तीएको जनावर विकास गर्न थाल्दा समय देखि। त्यतिबेलादेखि सदियों भन्दा सुधार उपकरण र अवस्था काट्ने प्रणाली परिवर्तन भयो।
इंसाफ से दिन खेत कामदार - गाउँमा र देश को कार्यकर्ता को लागि एक महत्वपूर्ण र स्मरणीय छुट्टी। रूस - एक कृषि देश र सबै भन्दा ठूलो निर्माताहरु र गाउँ उत्पादनहरु निर्यात को छ। विभिन्न बाली, तरकारी र पशुपालन को खेती: यसको कृषि उद्योग को उद्योग बीच को उत्पादन प्रकार को एक किसिम हो।
आज, रूस कृषि उत्पादनहरु को उत्पादन र आयातमा अग्रणी स्थिति देखा पर्न थाले। यसलाई यहाँ एक विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान मासु र डेयरी उत्पादन हो भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
अर्डर 1999 मा आफ्नो पैतृक भूमि गर्न युवा प्रेम र भक्ति मा साना पुस्ता शिक्षित को उद्देश्य संग, गाउँमा उद्योग को कर्मचारीहरु र कामदारहरूलाई प्रत्येक महत्त्व बढाउन उद्योग कृषि कामदारहरूको र कार्यकर्ता, आफ्नो उत्पादनहरु को प्रक्रिया को दिन को उत्सव मा एक उर्दी जारी गरिएको थियो।
छुट्टी - यसको शक्ति मई 31, 1991 खेत कामदार दिन रूस को राष्ट्रपति उर्दी अन्तर्गत आधिकारिक प्रवेश गरेको छ। उत्सव समय प्रकृति को धनी उपहार र विशाल रूसी क्षेत्रमा हुर्केका बाली काट्ने अन्त बीच पर्छ।
रूस मा दिन खेत कामदार: मिति, को मूल्य
रूसी क्षेत्रहरू वसन्त शरद ऋतु मा अन्न बाली मा काम गर्दै छन् - संग्रह श्रम ठूलो फल निवेश। यी अवधि समयमा, कर्मचारीहरु सारा प्राण, आफ्नो मुख्य र मनपर्ने काम दिएको हेरविचार र प्रयास बसे।
दोस्रो आइतबार अक्टोबर रूस मा हरेक वर्ष, असल र मेहनत काम नागरिकहरु समर्पित एक महान पर्व मनाइन्छ। यो छुट्टी - रूसी संघ को प्रक्रिया उद्योग मा किसानहरु र कामदारहरूलाई दिन।
2016 मा यो शुभ दिन 11 अक्टोबर पर्छ।
सबै कार्यकर्ता र उन्नत कार्यकर्ता आदर यो अद्भुत छुट्टी मा, गाउँमा काम गर्न आफ्नो सबै शक्ति लगानी गर्ने मान्छे, तर पनि उद्योग को कार्यकर्ता मात्र होइन सुन्दर न्यानो धन्यवाद भन्न। यो छुट्टी सजिलै townspeople गर्न स्टेपल खाना को एक पर्याप्त संख्या भएका गर्नुभयो सबै ती मानिसहरू समर्पित छ।
को खेत कामदार को दिन - छुट्टी कसरी मनाउन?
प्रत्येक यस छुट्टी ग्रामीण अनुसार यसको स्थापना परम्परा संग, यसको आफ्नै तरिकामा celebrates। स्थानीय अधिकारीहरूले एक उत्सव घटना संगठित। संगठित मेला, बिक्री र प्रदर्शनी सबैभन्दा विविध कृषि, क्रप, पशुधन र अन्य उत्पादनहरु प्रतिनिधित्व। तिहार एक रोचक परिदृश्य मा आयोजित गरिएको छ। सामान्य मा, यो संगीत, प्रतियोगिताहरूमा र पुरस्कार संग एक वास्तविक लोक तिहार छ। निमन्त्रणा कलाकारहरूको।
नेताहरूले बधाई र अविश्वसनीय जटिल काम कृतज्ञता र आभार व्यक्त जसमा एक भाषण दिए। कदर पत्र र प्रमाणपत्र, उपहार र नगद पुरस्कार awarding निर्माण को आवश्यक सम्मान नेताहरूले।
गाउँमा र आफ्नो कार्यकर्ता बारेमा
आज, गाउँमा सम्पूर्ण देशको लागि महत्वपूर्ण र महत्वपूर्ण छ एक उत्कृष्ट श्रम बजार, छ। गाउँमा मा खेत विशाल रूसी अर्थव्यवस्था मा एक प्रमुख क्षेत्र हुन जान्छ। देश को कानून अनुसार यो दिशा मा उपलब्धिहरू गर्व हुन सक्छ।
यहाँ लगभग साढे कालो पृथ्वीका सबै पार्थिव रिजर्व छ। कुनै अन्य देशमा जस्तै। यसलाई उत्कृष्ट पैदावार, र यसैले ठूलो लाभ प्राप्त गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हालै, सरकार ठूलो पर्याप्त रकम कृषि विकास लागि विनियोजन गर्दै छन्, र यो राम्रो परिणाम दिन्छ।
कार्यकर्ता को सही द्वारा योग्य धेरै ध्यान र खेत कामदार मनाउन पर्छ। आफ्नो शेयर धेरै समस्या र कठिनाइ पर्छ।
प्रकृति को vagaries अक्सर गाउँ कार्यकर्ता छक्कै पर्छन्, तर तिनीहरूले सधैं आशाहीन अवस्थामा बाहिर तरिका लायकका छन् र आफ्नो श्रम को फल बचत गर्नुहोस्। यसरी तिनीहरूले असंख्य मानिसहरूको हृदय देशमा न्यानोपन र जीवित को सौहार्द ल्याउन।
यो कति बल, स्वास्थ्य कल्पना गर्न असम्भव छ, र प्रयासमा आवश्यक खाना देश को यस्तो विशाल जनसंख्या धान्न र आफ्नो जीवन सुधार गर्न सुनिश्चित गर्न गाउँमा को मान्छे राख्नु।
तपाईं आफ्नो जन्मदिन भान्जा मा जवान पुरुष वा बधाई गर्न के आवश्यक छ
बधाई परिदृश्य 1 वर्ष पुरानो छ।
एक उपहार र बधाई जन्मदिनको केटी9वर्ष
कसरी घुमक्कड परेड वाहनो सजाने मा केही विचारहरू
डिजाइनर दिवस - व्यवसायीक एक छुट्टी
Pawpaw त्रि: विवरण र फोटो
माया मान्छे - प्राचीन सभ्यता प्रतिनिधिको
तातो पंच महान पेय नुस्खा
जाडो लागि ककडी व्यञ्जनहरु
धूर्त thrush: जहाँ धब्बा मा खमीर छन्
प्रयोग, मूल्य लागि निर्देशन: gynecological सुई
सामान्य Glagolev: जीवनी, फोटो, सोभियत संघ को हिरो को मृत्यु को कारण
बच्चाहरु को कोठा को आंतरिक
तरल एक्रिलिक स्नान: समीक्षा। एक्रिलिक तरल संग bathtubs को बहाली
कहिल्यै नाम राष्ट्रको बुझाउँछ के अचम्म लाग्छ?
के तापमान मा क्षति बिना ठोस भरिएको गर्न सकिन्छ छिंडीमा गर्न
तर "Sustarad": आवेदन र समीक्षा विवरण